12 / 07 / 2021 16 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 281 Views စာ0မှတ်ချက် မြန် & Furious, မြန်ဆန်ပြင်းထန်သော, ထွန်းလင်းတောက်ပခြင်း, Lego, Lego Fast နှင့် Furious, Lego ရုပ်ရှင်, Lego ရုပ်ရှင်, အား NBC, ဉဒေါင်း, streaming များ, အဆိုပါ Fast & Furious, universal, Universal Pictures, Universal Studios
၏အနာဂတ် Lego streaming အခွင့်အရေးများကိုရောင်းလိုက်သောကြောင့် Universal Filmed Entertainment Group နှင့် Peacock အကြားသဘောတူညီမှုအသစ်ကြောင့်ရုပ်ရှင်ကားများကိုထိခိုက်လိမ့်မည်။
မီဒီယာကုမ္ပဏီမှအနာဂတ်ရုပ်ရှင်များသည် Peacock platform ပေါ်တွင်သီးသန့်ထုတ်လွှင့်သွားမည်ဟု Universal မှသဘောတူခဲ့သည်။ ဒီသဘောတူညီချက်မှာကုမ္ပဏီမှလာတဲ့ရုပ်ရှင်တိုင်း၊ အနာဂတ်အတွက်နဖူးစည်းစာတန်းပါဝင်ရန်ကြေငြာခဲ့သည် Lego ရုပ်ရှင်တွေ အခုအောက်မှာလဲ.
“ Peacock ကိုလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်ကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခြင်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးပရိသတ်များနှင့်ရုပ်ရှင်မင်းသားများအတွက်ရုပ်ရှင်များစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ catalog ကိုဆက်လက်တိုးချဲ့ခဲ့သည်” ဟု NBCUniversal မှ Direct-to-Consumer နှင့် International မှဥက္ကChairman္ဌ Matt Strauss ကပြောကြားခဲ့သည်။
"Universal ရိုက်ကူးဖျော်ဖြေရေး Group မှတစ်စိတ်ကူး p ဖြစ်ခဲ့သည်artပထမ ဦး ဆုံးလစာပြူတင်းပေါက်ရှိ Peacock သို့၎င်းတို့၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော blockbuster ဇာတ်ကားများနှင့်ချစ်စရာကောင်းသောဂိမ်းများကိုတင်ဆောင်ရုံသာမကတစ်နှစ်ပတ်လုံး Peacock ဖောက်သည်များအတွက်လတ်ဆတ်သော၊ မူရင်းရုပ်ရှင်များကိုပါထပ်မံပေးအပ်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။
ဒေါင်းဒေါင်းသည်လက်ရှိတွင်အမေရိကန်၌သာသီးသန့်ရရှိနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဒေသတွင်းရှိကြည့်ရှုသူများကိုသာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ Universal သည်အမေရိကန်ပြင်ပရှိအခြား streaming ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အပေးအယူလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် Peacock သည်ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ချိရန်စီစဉ်နေခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အခြားနိုင်ငံများသို့လည်းသက်ရောက်မှုရှိသည်။
သဘောတူညီချက်တွင်သူတို့ပြဇာတ်ရုံတင်ပြီးနောက်လေးလမပြည့်မီတွင်စင်မြင့်ပေါ်သို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုသဘောတူညီချက်အရရုပ်ရှင်ကားများသည်ငွေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤသည်ကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီ၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းဆွေးနွေးနေကြောင်းသတင်းကိုအောက်ပါအတိုင်း Lego က။ အပါအဝင်ရုပ်ရှင်တွေ Fast နှင့် Furious လှည့်ဖျား - ပိတ် teased.
ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတရားဝင်ကြေငြာဖို့စောင့်နေတုန်းပါပဲ Lego Group နှင့် Universal တို့ကိုင်ထားနိုင်သော်လည်း partnership တစ်ခုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည် ကာတွန်း LEGO Minions ဗီဒီယို မကြာသေးမီကအလွန်အနည်းဆုံးမှာ။
← သင်၏အိမ် LEGO-fy နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်အချက်နှစ်ချက်ကိုဆုပ်ကိုင်ပါ
သင်သိရန်လိုအပ်သည် LEGO တောင်းခြင်းဖြည့်စွက်ခြောက် →